Amasu Okuthola Ukufunda Ama-Blogger Amasha | Martech Zone
Amasu Okutholwa Kwezifundi Ama-Blogger Amasha
NgoLwesihlanu, Mashi 30, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kudinga isibindi esithile ukuzibophezela ekubhaleni ibhulogi. Uzikhipha kuwebhu ngerekhodi elibhaliwe lemicabango yakho nemibono yakho. Lokho kukhanya kukuvulela inhlekisa esheshayo noma, ngemuva kokusebenza kanzima, i-ounce yenhlonipho. Ngamafuphi, ubeke idumela lakho emgqeni - noma yimaphi amathuba okuqashwa esikhathini esizayo angaqedwa ngephutha elilodwa. Kuyesabeka!
Usethe ibhulogi yakho ku- Blogger, I-TypePad or WordPress (kunconyiwe). Ngemuva kwalokho uhlala futhi ucabange ngalokho kuqala okuthunyelwe kwebhulogi… amakhulu emibono ayaphotha ekhanda lakho. Uqala kanjani? Ngitshela abantu ukuthi bakwenze nje bese beqeda ngakho. Ngaqala ngo rant on Mountain Dew ukukhangisa ngesidlo sasekuseni. Ngokuthunyelwe kwakho kokuqala, ngaphandle kokuthi uyigama elaziwayo, uqala ngegama elingu-zero futhi, mhlawumbe, abafundi be-zero.
Ukube bengazi ngaleso sikhathi lokho engikwaziyo manje, okuthunyelwe okumbalwa okulandelayo kungenzeka ukuthi kwehluke kancane. Angizisoli ngendlela engiyithathile, kodwa nakanjani bengingathola abafundi abasha ngokushesha okukhulu. Bengingagxili kubafundi, bengimane ngizama ukujwayela ukubhala usuku ngalunye noma kunjalo futhi ngizizwe ngakho. Indlela engcono ebengingayithatha bekungaba ukubhala izimpendulo ezinhle kokunye okuthunyelwe kubhulogi. Ngangifunde amabhulogi amaningi ngaphambi kokuthi ngiqale kepha angizange ngihlanganyele engxoxweni. Ukube ngikwenzile lokho, ama-blogger amaningi nge idumela ngabe ngabe lifunde ibhulogi yami futhi kungenzeka likhuthaze ukubhala kwami.
Ithiphu #1 Kanye nokunye okuthunyelwe okusha, bhala ngokunye okuthunyelwe ku-blogosphere ukuze uqalise ukufunda kwakho. Qiniseka ukuthi usebenzisa trackbacks.
Ngemuva kokuthunyelwe kwakho okumbalwa kokuqala, mema (ukufumbathisa, funa, ncenga, songela) abangani bakho ukuthi bafunde futhi baphawule kokuthunyelwe kwakho. Amazwana abonisa ukwethembeka kubhulogi ngoba inika abafundi umqondo wokuthi abafundi bakho bacabangani ngesiza sakho nokuthi ibhulogi yakho ifanele ukuphawula ngayo. Uma wazi amanye ama-blogger, bakhuthaze ukuthi bakubuyekezele i-blog yakho bese bekuphonsa 'uthando lokuxhumanisa'.
Ithiphu #2 Yakha amanye amazwana bese uzama ukuthola okunye ukulandelwa emuva kuma-blogger owaziyo.
Kulungile, uye e-salon yobuhle wayolungisa izinwele zezinwele, manje sekuyisikhathi sokugqoka ubonise amazolo amasha! Zithululele emiphakathini nasezakhiweni zokubekisa zenhlalo. Lapho ngisiza uJD ukwethula ibhulogi yakhe, Okumnyama Kwezebhizinisi, Ngithole i-JD ukuthi ijoyine i-MyBlogLog bese ngithumela ibhulogi yayo kumasayithi amaningana enziwa amabhukhimakhi omphakathi, ikakhulukazi StumbleUpon. IStumbleUpon ayidingi okuthunyelwe kwangempela ukukala - ungavele usebenzise incazelo namanye amathegi. Abasebenzisi beStumbleUpon abanezintshisakalo ezifanayo bazokwenza kanjalo khubeka kubhulogi yakho futhi abaningi bazonamathela ngenxa yezintshisekelo ezifanayo.
Ithiphu #3 Sebenzisa amanye amanethiwekhi wokubhuloga nezindawo zokubekisa zenhlalo.
Njengoba uqhubeka nokubhala, qiniseka ukukwenza hlaziya okuqukethwe kwakho. Lokho kuzokunikeza impendulo yokuthunyelwe izivakashi ezikuthola kakhulu kanye nokuthunyelwe okunama-hits amaningi. Ngokuhambisana nokubheka ukuphawula kwakho, manje usungathola isithombe somhlahlandlela ongafaka okuqukethwe kwakho kwebhulogi. Kwenze! Lather (hlanza okuqukethwe kwakho), hlambulula (lahla udoti) bese uphinda. Qhubeka ukwenze futhi okuthunyelwe okungu-500 ngokuhamba kwesikhathi ngeke ukholwe ukuthi uthole ibanga elingakanani.
Ithiphu #4 Lather, hlambulula, phinda.
Ithiphu yokugcina: Gwema ukukhwabanisa lapho. Nanku umthetho wesithupha: noma isiphi isayithi le- 'Top Blogging' esidinga ukuthi ufake ibheji, isibhengezo, noma omunye umfanekiso, hlala kude. Akukho ukulungiswa okusheshayo kubhulogi. Udumo luthatha isikhathi, ukwakha ukufunda kuthatha isikhathi, futhi ukwakha 'ukutholakala' kwakho ezinjinini zokusesha kuthatha isikhathi. Gwema noma iyiphi indawo yokubhuloga ezokwandisa izinga lebhulogi lakho ngokubeka isithombe kubhulogi yakho.
Ithiphu #5 Gwema ukubeka imidwebo kusayithi lakho elimane likhangise i-cruff blogging aggregator ethile enganikezi lutho ngawe.
Ukubuka kuqala kwe-Scrapblog!
Kungani uFlex no-Apollo Bazonqoba
Mar 31, 2007 ku-3: 25 AM
IGreat Post, uDoug.
Ukushiya ukuphawula okuhle kuyindlela enhle yokuthola ukufundwa - ube ngowokuqala ukuphawula ngebhulogi lami, futhi bengilokhu ngingumfundi oqinile webhulogi yakho kusukela lapho. 😉
Ukubuye ngiphinde ngikweluleke ngokukunika ibhulogi ukubukeka nokuzizwa okuhlukile - ungakwenzi kube nzima kakhulu, kuyingozi ukusebenzisa ama-plug-ins amaningi kakhulu afaka izici ezinhle. Eziningi zalezo zici ziqala ukusiza lapho uthole inani elikhulu lokuthunyelwe.
Njengoba uDoug asho ngaphambili, yiba nohlobo oluthile lokukhuthaza olugcina abafundi kubhulogi yakho; amaningi eza ngenjini yokusesha, futhi angafunda okufakiwe okukodwa kuphela. Uma, noma kunjalo, ukhombisa okuthunyelwe okuhlobene ekugcineni kokuthunyelwe kwakho, bangahlala isikhashana, futhi ukubuya, Futhi!
Mar 31, 2007 ku-9: 11 AM
Lokho kumeluleka okuhle! Bengingazi ukuthi ngibe ngowokuqala ukuphawula kokwakho… lokho kuhle impela! Ngiyakuthanda ukufunda ibhulogi yakho!
Mar 31, 2007 ku-4: 46 AM
Amathiphu amangalisayo ama-blogger amasha uDoug.
Ngisekela konke okubhalile.
Ungapheli amandla! Kwesinye isikhathi kuzozwakala sengathi ukhuluma nodonga lwe-friggin. Ungakhathazeki, abantu balalele / babukele noma bengaphenduli. Qhubeka!
Ngingu- $ 0.02 my wami nje
Mar 31, 2007 ku-9: 14 AM
Leyo $ 0.02 ibiza izigidi zemali, Tony! Ama-Blogger ayakhathazeka uma engatholi izimpendulo eziningi… kepha iqiniso ukuthi u-98% kuye ku-99% (ngokwezwi nezwi… ngiye ngafunda izibalo ezithile) zabantu abavakashela ibhulogi yakho abasoze bashiya amazwana. Ngakho-ke khumbula ukuthi abantu bayafunda futhi wenza umsebenzi omuhle!
Kuyi-marathon, hhayi i-sprint.
Mar 31, 2007 ku-1: 56 PM
Doug, ukwesekwa kwakho bekubaluleke kakhulu futhi ngaphandle kokuholwa nguwe bengizabalaza. Iphuzu ukuthi, kuyasiza ekuqaliseni ukuba nomuntu onolwazi oluningi ukukusiza uqonde ukuthi uqonde ngqo noma uzenza isilima. Mayelana nezingosi zokuxhumana, phawula ngamanye amasayithi futhi uzenze waziwe. Thumela kaningi futhi uye lapho inhliziyo yakho ikuthwala khona. Ngine-blog yebhizinisi kepha ngiphawule nangezombusazwe zezemidlalo.
Umeluleki wami futhi oyisibonelo sami nguDoug Karr, inombolo 3000 okuthile emhlabeni. Kube mnandi ukubuka ibhulogi yakhe izuza abafundi ngezinga elimangalisayo.
Mar 31, 2007 ku-2: 01 PM
Ngiyabonga, JD! Ngicabanga ukuthi umsebenzi womqeqeshi uhlale ulula lapho ethola i-superstar azosebenza nayo!